🥇बच्चाहरू र तिनीहरूका पाल्तु जनावरहरूको सब भन्दा राम्रा भिडियोहरू
यी जनावरहरूको साथ बच्चाहरूको सर्वश्रेष्ठ भिडियो हो। घरका बच्चाहरूलाई सुरक्षा दिन जनावरहरूको ठूलो सहज ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले उनीहरूलाई कति "केनेलहरू" गरे पनि उनीहरूले बच्चालाई हानी गर्ने छैनन्, र जोकर गरेर उनीहरूको हाँसोको नक्कल गर्न वा उस्काउने पनि।
कुकुर र बच्चा एक अर्कासँग गाँसिएका छन् कि कसलाई बच्चाले कुकुरको टोकरीमा तानेको लागि खेल्ने राम्रो समय हो भनेर निश्चित रूपमा थाहा छैन।
बच्चाले आफ्नो पहिलो आवाजहरू तालिम पाएर पत्ता लगायो कि उसको कुकुरले पनि उसको कुरा सुन्ने बित्तिकै "बोल्छ"। कस्तो कुराकानी! वा हामी राम्रो गीत भन्न?
म यस खेलौना कोशिस गर्दैछु
चरणमा जसमा बच्चाहरूले सबै कुरा फेला पार्छन् उनीहरूले उनीहरूको मुखमा फेला पार्छन्, बिरालोको अनुहार पुच्छरले यसको अनुहार गुदार्ने भन्दा बढि केहि राम्रो छैन। बिरालो हुन पनि तपाईं धैर्य हुनुपर्दछ।
"यदि मानव बच्चा यस प्रकारले हिँड्दछ भने, यो केहिको लागि हुनेछ ..." यी दुई सुन्दर कुकुरहरू कसरी बच्चाले क्रल गर्दछन् भन्ने कुरा देख्दा यो प्रभावशाली हुन्छ।
यो उसलाई रुने छैन
यो कुकुरले बच्चा रोएको देख्न सक्दैन। उसले आमाबाबुलाई साना केटाकेटी छनौट गर्ने निर्णय गर्छ, र त्यसले बच्चा पनि रोकिन्छ।
संसारमा सबैभन्दा धैर्य कुकुर
यो कुकुरको लागी असम्भव देखिन्छ कि बच्चाले उसलाई गरेको सबै बेवकूफ चीजहरूको सामना गर्न सक्षम हुन, कुनै पनि समय आफैलाई बचाउन कोशिस नगरी।
खाना साझेदारी गर्दै
बच्चा कुकुरको खाना लिन रोक्दैन, र पनि फीडर उसलाई आकर्षित गर्दछ। कुकुरले खाने कुरामा जिद्दी गर्दछ, उसले आफ्नो थाल पनि ठीक गर्छ, तर त्यसले सानो "चोर" लाई कुनै नोक्सान गर्ने सोच्दैन।
बच्चाको लागि यो भन्दा राम्रो जोकर अझै छ जो आफ्नो पपीको नाच र उसको अगाडि पिरोइट्स भन्दा पनि क्रल गर्दछ। बच्चाको हाँसो फैलियो, जसले कुकुरलाई प्यारो गर्न जारी राख्दछ।
यस्तो कुकुर संग, कुनै बच्चा बाथटबमा जान प्रतिरोध गर्दैन।
उसको सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग सुतिरहेको
ऊ एकदमै सानो बच्चा हो। कुकुर निद्राको बखत उनीसँग जोडिएर बस्छ, र आमाको आवाज सुन्नेबित्तिकै उसलाई ब्यूँझाउने लक्ष्य राख्छ। र यसैले यो निश्चित हुन्छ कि उसको उठ्छ।
यी बच्चाहरू आफ्ना पाल्तु जनावरहरूसँग बस्ने उत्तम भिडियोहरू हुन्। र यी जनावरहरूको पहिचान जसले उनीहरूले के गर्छ भन्ने समर्थन गर्दछ र कहिलेकाँही उत्साहित हुन्छन् आफ्ना "सानो मालिक" लाई खेल्न र हेरचाह गर्न पनि।